eTN Politikan'ny tsiambaratelo | eTurboNews | Vaovao momba ny dia
Home » eTN Politikan'ny tsiambaratelo
eTN Politikan'ny tsiambaratelo
eTurboNews, Inc (eTN) dia mamoaka ity Politika momba ny tsiambaratelo amin'ny Internet ity mba hampahafantatra anao ny fanaovanay momba ny fanangonana sy ny fampiasana fampahalalana omenao anay amin'ny alàlan'ny fifaneraserana amin'ity tranonkala ity sy ireo tranonkala mifandraika amin'ny eTN hafa. Ity politika ity dia tsy mihatra amin'ny fampahalalana nangonina tamin'ny fomba hafa na fehezin'ny fifanarahana hafa.
Ahoana no fomba fanangonana vaovao
Ny eTN dia manangona ny mombamomba anao amin'ny fomba isan-karazany, ao anatin'izany rehefa misoratra anarana amin'ny eTN amin'ity tranokala ity ianao, rehefa misoratra anarana amin'ny serivisy eTN amin'ny alàlan'ity tranonkala ity, rehefa mampiasa vokatra na serivisy eTN amin'ny alàlan'ny tranokala ianao, rehefa mitsidika tranokala eTN na tranokalan'ny mpiara-miombon'antoka eTN sasany, ary rehefa miditra fampiroboroboana Internet ianao na sweepstakes tohanan'ny na eTN.
Rehefa misoratra anarana amin'ny tranokalanay ianao dia mangataka sy manangona vaovao toy ny anaranao, ny adiresy mailaka, ny kaody zip ary ny orinasanao. Ho an'ny vokatra sy serivisy sasany dia mety hangataka ny adiresy sy ny mombamomba anao momba ny fanananao na ny fidiram-bolanao izahay. Vantany vao misoratra anarana amin'ny eTN ianao ary miditra amin'ny serivisinay, dia tsy fantatra anarana tsy fantatrao izahay.
Afaka mifidy ny handray anjara amin'ny e-litera eTN (serivisy mailaka) isan-karazany ny mpampiasa, manomboka amin'ny vaovao isan'andro ka hatramin'ny special supplier. Ny eTN dia manangona mombamomba anao manokana mifandraika amin'ny fisoratana anarana sy ny fampiasana serivisy toy izany.
Ireo mpampiasa dia afaka mifidy ny handray anjara amin'ny fampiroboroboana sy / na ny fifaninanana fampiroboroboana izay eTN dia mitarika indraindray amin'ny anaran'ny mpanjifany. Ny eTN dia manangona ny mombamomba anao mifandraika amin'ny fisoratana anarana ho an'ny mpampiasa sy ny fandraisana anjara amin'izany fampiroboroboana sy fifaninanana izany.
Fandaharana sy seminera fanabeazana
Ireo mpampiasa dia afaka mifidy ny handray anjara amin'ny fandaharam-pianarana sy seminera izay tarihin'ny eTN indraindray. Ny eTN dia manangona ny mombamomba anao mifandraika amin'ny fisoratana anarana ho an'ny mpampiasa sy ny fandraisana anjara amin'ireo fandaharana toy izany.
“Cookies” dia fampahalalana kely izay voatahiry ao amin'ny tranokalanao ao amin'ny kapila mafy ataon'ny solosainao. eTN na ny mpanao dokambarotra aminy dia mety mandefa cookie amin'ny solosainao amin'ny alàlan'ny browser-nao. Mampiasa cookies ny eTN hanarahana ny fangatahana pejy sy ny faharetan'ny fitsidihan'ny mpampiasa tsirairay ary ny fampiasana cookies dia ahafahantsika manome ny mombamomba ny mpampiasa miaraka amin'ny fampahalalana mifanaraka amin'ny safidin'ny mpitsidika sy ny filokana ihany koa ny fitsidihan'ny mpampiasa ny tranokalanay. Azonao atao ny misafidy raha hanaiky cookies amin'ny alàlan'ny fanovana ny fikirana amin'ny browser-nao. Azonao atao ny mamerina mametaka ny tranokalanao handà ny cookies rehetra na hamela ny fampiratiana anao hampiseho aminao rehefa andefasana cookie. Raha misafidy ny tsy hanaiky cookies ianao dia mety hihena ny zavatra niainanao tao amin'ny tranokalanay sy ireo tranokala hafa ary mety tsy mandeha araka ny niniana ny fiasa sasany.
Ny eTN dia mandray sy mandray an-tsoratra fampahalalana avy hatrany amin'ny lozisialy mpizara avy amin'ny tranokalanao, ao anatin'izany ny adiresy IP anao, ny mombamomba ny cookie eTN, ary ny pejin-tranonkala tadiavinao Mampiasa ity fampahalalana ity ny eTN mba hanampiana amin'ny famaritana olana amin'ny mpizara anay, ho an'ny fitantanana ny rafitra ary hijerena ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanay. Ny fanangonam-baovao dia azo angonina ary ampiasaina hanatsarana ny atin'ny pejin-tranonkalantsika sy hanamboarana ny atiny sy / na ny firafitry ny mpampiasa tsirairay.
Raha mividy zavatra amin'ny tranokala eTN ianao dia mila mahafantatra fampahalalana azo fantarina manokana toy ny anaranao, adiresy mailaka, adiresy mailaka, nomeraon'ny carte de crédit, ary ny daty lany daty. Io dia ahafahanay manodina sy manatanteraka ny kaomandinao ary mampandre anao ny momba ny kaomandinao. Ity fampahalalana ity dia mety ampiasain'ny eTN hampandrenesana anao ny vokatra sy serivisy mifandraika amin'izany. Ny mombamomba ny carte de crédit dia tsy hozaraina na amidy amin'ny antoko fahatelo tsy misy ifandraisany na inona na inona antony tsy misy alalana mazava anananao, afa-tsy izay ilaina amin'ny fikirakirana ny fifanakalozana.
Fampiasana ny fampahalalana
Raha misafidy ny hanome anay mombamomba anao manokana izahay dia ampiasainay voalohany indrindra hanaterana ny serivisy nangatahinao. eTN dia mety hampiasa ny mombamomba anao amin'ny fomba isan-karazany ao anatin'ireto:
o eTN dia afaka mampiasa fampahalalana manokana hanangonana amin'ny alàlan'ny tranokalany handefasana fampiroboroboana mailaka kendrena amin'ny anaran'ny mpanao dokam-barotra sy ireo mpiara-miombon'antoka aminy.
o eTN dia mety hanambatra ny mombamomba anao izay misy aminay miaraka amin'ny fampahalalana azonay avy amin'ireo mpiara-miasa na orinasa hafa mba hanaterana tsaratsara kokoa ny vokatra sy serivisy mety hahaliana anao.
o eTN dia afaka mampiasa fampahalalana manokana hifandraisana amin'ireo mpampiasa momba ny fanavaozana ny famandrihana amin'ny serivisy sy vokatra eTN.
o eTN dia mety hampiasa fampahalalana azo fantarina manokana handefasana fampandrenesana momba ny vokatra sy serivisin'ireo mpiara-miasa aminay toa ny mailaka sy / na mailaka paositra.
o Raha manome fampahalalana ara-bola ianao dia ampiasainay voalohany indrindra izany fampahalalana izany hanamarinana ny trosanao sy hanangonana ny fandoavam-bola amin'ny fividiananao, ny baiko anao, ny fisoratana anarana, sns.
o eTN dia mety mandefa fampandrenesana momba ny vokatra na e-taratasy fanontana manokana ho an'ireo misoratra anarana amin'ny Internet.
o Raha mandray anjara amin'ny fandaharam-pianarana eTN, seminera na programa hafa tsy misy fotoana ianao, dia mety hifandray aminao izahay hampahatsiahy anao ny fe-potoana farany ho avy na ny fampahalalana fanampiny momba ireo programa ireo.
o eTN indraindray dia manao famandrihana ho an'ny mpamandrika sy / na ny mpampiasa mba hikendrena tsara kokoa ny atinay ho an'ny mpihaino anay. Ny fampahalalana nangonina nangonina indraindray zaraina amin'ny mpanao dokam-barotra, na izany aza, tsy hizara mombamomba ny olona manokana amin'ny antoko fahatelo izahay.
o eTN dia miasa amin'ny tranokala maro mampiseho ny atiny sy serivisy mifandraika amin'ny dia. eTN dia afaka mizara fampahalalana manokana nangonina avy amin'ireo mpampiasa ny tranokalany anatiny ao amin'ireo tranokala ireo mba hanompoany bebe kokoa ireo mpampiasa azy.
eTN dia manana vokatra sy serivisy marobe ary noho izany lisitra mailaka sy fampiroboroboana marobe. Ao anatin'ny ezaka mamela ny mpampiasa hampifanaraka ny fandraisan'anjaran'izy ireo amin'ny serivisy eTN sy fampiroboroboana, ny eTN dia manome ny mpampiasa fahafaha-misafidy lisitra manokana na vokatra mahaliana ary safidin'ny opt-out dia vokatra sy fampiasana / lisitra manokana. Ny fampiroboroboana ny mailaka rehetra nalefa avy amin'ny eTN dia manome rohy fialan-tsasatra amin'ny faran'ny mailaka arak'izay ahafahan'ny mpampiasa misafidy ny vokatra manokana sy ny fampiroboroboana. Raha mahazo iray amin'ireo mailaka ireo ianao ary maniry ny hisoratra anarana dia araho ny torolalana omena amin'ny mailaka tsirairay na fifandraisana [email voaaro]
Indraindray isika dia afaka mampiasa ny mombamomba ny mpanjifa amin'ny fampiasana vaovao tsy nampoizina izay tsy naseho teo aloha momba ny Privacy Privacy. Raha miova ny fomba fanazavàna ataonay amin'ny fotoana ho avy, dia hapetrakay amin'ny tranokalanay ny fanovana politika.
Fizarana vaovao voaangona amin'ireo antoko fahatelo
Amin'ny ankapobeny, ny eTN dia tsy manofa, mivarotra, na mizara fampahalalana manokana momba anao amin'ny olon-kafa na orinasa tsy miankina afa-tsy ny manome vokatra na serivisy nangatahinao, rehefa mahazo alalana izahay, na amin'ireto toe-javatra manaraka ireto:
o Afaka manome fampahalalana manokana momba ny mpampiasa anay izahay amin'ireo mpiara-miombon'antoka matoky sy mpivarotra izay miasa amin'ny anaran'ny na amin'ny eTN tsiambaratelo ary fifanarahana mitovy amin'izany mandrara ny fampiasan'ny antoko toy izany ny fampahalalana. Ireo orinasa ireo dia mety hampiasa ny mombamomba anao manokana hanampiana ny eTN hifandray aminao momba ny tolotra avy amin'ny eTN sy ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny varotra. Na izany aza, ireo orinasa ireo dia tsy manan-jo hampiasa na hizara ity vaovao ity.
o Rehefa misoratra anarana amin'ny programa fanabeazana, fifaninanana na fampiroboroboana hafa izay tohanan'ny antoko fahatelo ianao, ny antoko fahatelo dia homena fampahalalana azo fantarina raha tsy hoe napetraka mifandraika amin'ilay fampiroboroboana.
o eTN dia mety mizara ny mombamomba anao indraindray toy ny adiresy mailaka amin'ireo antoko fahatelo atokisana izay manolotra atiny izay mety hahaliana ny mpampiasa ary iharan'ny adidy tsy fidiny avy amin'ny antoko fahatelo toy izany.
o Azontsika atao ny mizara ny mombamomba anao manokana izay ananantsika finoana matanjaka fa ilaina ny hetsika toy izany mba hanarahana ny fizotry ny fitsarana, ny didim-pitsarana na ny fizotran-dalàna naroso tamin'ny eTN, na ny fametrahana na hampiasa ny zonay ara-dalàna na hiaro amin'ny fitakiana ara-dalàna.
o Azontsika atao ny mizara izany fampahalalana izany raha toa ka mino izahay fa ilaina izany raha te hanadihady (na hanampy amin'ny famotopotorana), hisorohana, na handray andraikitra manoloana ny asa tsy ara-dalàna, fisolokiana ahiahiana, toe-javatra misy atahorana hampidi-doza ny fiarovana ara-batana. an'ny olona rehetra, fanitsakitsahana ny fepetra fampiasan'ny eTN, na araka izay takian'ny lalàna.
o Raha ny eTN dia nahazo na natambatra tamin'ny orinasa hafa dia hamindra vaovao momba anao amin'ity orinasa hafa ity izahay mifandraika amin'ny fahazoana na fanakambanana.
Misy vondrona fifanakalozan-kevitra amin'ny mailaka ho an'ny mpampiasa anay amin'ny tranokalanay sasany. Tokony ho fantatry ny mpandray anjara fa ny fampahalalana voalaza ao amin'ireto lisitra fifanakalozan-kevitra ireto dia natao ho an'ny mpikambana rehetra ary lasa fampahalalana ampahibemaso. Manoro hevitra anao izahay mba hitandrina rehefa manapa-kevitra ny hampahafantatra izay mombamomba anao ao amin'ireo vondrona fifanakalozan-kevitra toy izany.
Ity tranokala ity dia mandray fepetra ara-barotra mety hiarovana ny mombamomba anao manokana. Rehefa mamindra sy mahazo karazana fampahalalana saro-pady toa ny carte de crédit sy ny fampahalalana momba ny fandoavam-bola izahay, dia mampitodika ireo mpampiasa amin'ny lohamilina SSL (Secure Socket Layer) mpizara efa voahidy. Vokatr'izany dia ampitaina amin'ny Internet soa aman-tsara ny angon-drakitra mampihetsi-po alefanao amin'ny tranokalanay toy ny carte de crédit sy ny fampahalalana momba ny fandoavam-bola.
Ny eTN dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fanitsakitsahana ny filaminana na amin'ny hetsika ataon'ny antoko fahatelo izay mahazo ny vaovao. eTN koa dia mampifandray amin'ny tranokala maro isan-karazany ary misy dokam-barotra amin'ny antoko fahatelo. Tsy tompon'andraikitra amin'ny politikany momba ny tsiambaratelo izahay na ny fomba itondran'izy ireo vaovao momba ny mpampiasa azy.
Momba ny tsiambaratelon'ny ankizy
Ity tranonkala eTN ity dia tsy natao hampiasan'ny ankizy ary ny eTN dia tsy manangona fahalalana vaovao amin'ny ankizy. Tokony ho 18 taona ianao vao afaka mampiasa na mampiasa an'ity tranonkala ity.
Vaovao farany / ovao ny angonao
Raha te hanavao ny adiresy mailaka anao na hanova ny safidinao mailaka dia mifandraisa [email voaaro]
eTN dia mitahiry ny zony, amin'ny fotoana rehetra ary tsy misy fampandrenesana, hanampy amin'ny fanovana, fanovana, fanavaozana na fanovana ity Politikan'ny tsiambaratelo ity amin'ny alàlan'ny fandefasana fanovana, fanavaozana na fanovana toy izany ao amin'ny tranonkala. Ny fanovana, fanavaozana na fanovana toy izany dia hahomby avy hatrany aorian'ny fakana sary ao amin'ny tranonkala. Hampahafantarina ny mpampiasa ny fanovana an'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity amin'ny alàlan'ny rohy "havaozina toy ny" amin'ny tranokala eTN.
Inona koa no tokony ho fantatro momba ny fiainako manokana rehefa an-tserasera?
Ny tranokala eTN dia misy rohy hyperlink maro amin'ny tranonkala hafa. Ny tranokala eTN koa dia misy doka an'ny antoko fahatelo. Ny eTN dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fampiharana fiainana manokana na ny atin'ny tranonkalan'ny antoko fahatelo na mpanao dokam-barotra. Ny eTN dia tsy mizara ny mombamomba anao manokana omenao ny eTN amin'ireo tranokala izay misy rohy eTN, afa-tsy izay voalaza any an-toeran-kafa ao anatin'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity, na dia mety mizara angona angona amin'ny tranokala toy izany aza ny eTN (toy ny isan'ny olona mampiasa ny tranokalanay).
Azafady mba zahao amin'ireo tranokalan'ny antoko fahatelo ireo raha te hamantatra ny politikany manokana. Rehefa ampidirin'ny eTN ao anaty iray amin'ireo pejin-tranonkala eTN ny atiny fahatelo, dia hampiasa ezaka mety ny eTN hanoro hevitra ireo mpampiasa anay fa mivoaka ny tranokala misy eTN izy ireo ary miditra amin'ny tranokala fehezin'ny antoko fahatelo. Ny mpanjifa / mpampiasa dia tokony hamaky sy hahatakatra izay politika momba ny tsiambaratelo voamarika ao amin'ny tranonkalan'ny antoko fahatelo.
Aza hadino fa isaky ny manambara an-tsitrapo ny mombamomba anao amin'ny Internet ianao - ohatra amin'ny alàlan'ny mailaka, lisitra fifanakalozan-kevitra na any an-toeran-kafa - dia azo angonina sy ampiasain'ny hafa izany. Raha fintinina, raha mandefa fampahalalana manokana an-tserasera azonao idirana amin'ny besinimaro ianao, dia mety hahazo hafatra tsy ampoizina avy amin'ny antoko hafa ho setrin'izany.
Farany, ianao irery no tompon'andraikitra amin'ny fitazonana ny tsiambaratelon'ny mombamomba anao. Mitandrema sy tompon'andraikitra isaky ny amin'ny Internet ianao.
Ny zonao manokana momba ny fiainana manokana any California
Araka ny lalàna Lalàn'i California, ny mponina ao California izay nanome fampahalalana manokana ho an'ny orinasa iray izay nanorenany fifandraisana ara-barotra ho an'ny tena manokana, fianakaviana, na tanjona an-trano ("mpanjifa California") dia manan-jo hangataka fampahalalana momba ny ny raharaham-barotra dia nanambara ny mombamomba anao tamin'ny antoko fahatelo ho an'ny tanjona ara-barotra mivantana an'ny antoko fahatelo. Raha tsy izany, manome lalàna ny lalàna fa raha manana politika manokana momba ny tsiambaratelo ny orinasa izay manome safidy tsy misafidy na misafidy hampiasa ny mombamomba anao amin'ny ankolafy fahatelo ho an'ny tanjona ara-barotra, dia mety hanome anao fampahalalana momba ny fomba fampiharana ny orinasa ireo safidy safidinao.
Satria ity tranokala ity dia natao hampiasaina ifotony amin'ny asa aman-draharaha, io lalàna ny lalàna any California io dia tsy hihatra, amin'ny ankamaroan'ny tranga, amin'ny fampahalalana nangonina.
Raha toa ka monina ao Kalifornia mampiasa an'ity tranokala ity ho an'ny tena manokana, fianakaviana, na fikasana ao an-tokantrano mitady vaovao voarakitra ao amin'ny lalàna, ity tranokala ity dia mendrika ny safidy hafa. Araka ny voalaza tao amin'ny Politikanay momba ny tsiambaratelo, ireo mpampiasa ny tranokala dia afaka misafidy na misafidy ny hampiasana ny mombamomba anao manokana avy amin'ny antoko fahatelo. Noho izany dia tsy takiana amintsika ny mitazona na manambara ny lisitry ny antoko fahatelo izay nahazo ny mombamomba anao nandritra ny taona teo aloha ho an'ny tanjona ara-barotra. Mba hisorohana ny fampahalalana ny mombamomba anao manokana hampiasaina amin'ny varotra mivantana ataon'ny ankolafy fahatelo dia aza misafidy ny hampiasa izany rehefa manome fampahalalana manokana momba ilay tranonkala ianao. Azafady mba mariho fa isaky ny misafidy ny handray serasera amin'ny ho avy ianao avy amin'ny antoko fahatelo, ny fampahalalana anao dia hiankina amin'ny politikan'ny antoko fahatelo. Raha manapa-kevitra ianao avy eo fa tsy tianao hampiasa ny mombamomba anao ny ankolafy fahatelo dia mila mifandray mivantana amin'ny antoko fahatelo ianao satria tsy voafehinay ny fampiasan'ny antoko fahatelo vaovao. Tokony hojerenao foana ny politika momba ny tsiambaratelo an'ny antoko manangona ny mombamomba anao mba hamaritana ny fomba hitantanan'io orinasa io ny fampahalalana anao.
Ireo mponina any California izay mampiasa an'ity tranokala ity ho an'ny tena manokana, fianakaviana, na tanjona an-trano dia mety hangataka fampahalalana bebe kokoa momba ny fanarahanay ity lalàna ity amin'ny alàlan'ny mailaka [email voaaro] Tokony apetrakao ao amin'ny sahan-kevitry ny mailakao ny fehezan-teny "Ny zonao manokana momba ny fiainana manokana any California". Azafady azafady fa takiana fotsiny izahay hamaly ny fangatahana iray isaky ny mpanjifa isan-taona, ary tsy voatery hamaly ireo fangatahana natao tamin'ny alàlan'ny alàlan'ity adiresy mailaka ity izahay.
Ny fanekenao amin'ity politika ity
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tranokalanay, dia manaiky ny fanangonana sy ny fampiasana fampahalalana avy amin'ny eTN ianao araka izay voalaza ao anatin'ity politika ity. Azafady mba mariho koa fa ny fampiasanao ny tranokala dia fehezin'ny Lalàna sy Fepetra eTN. Raha tsy manaiky ny fepetra momba ny Politikan'ny tsiambaratelo na ny fepetra sy fepetra ianao dia aza mampiasa ny tranokala, vokatra ary / na serivisy.
Alefaso azafady mba misy fanontaniana momba ny Politikan'olon-tokana an'ny eTN [email voaaro]
Naoty: Smush dia tsy mifanerasera amin'ny mpampiasa farany ao amin'ny tranonkalanao. Ny safidy fidirana Smush tokana dia ny famandrihana newsletter ho an'ny admin tranonkala ihany. Raha te hampandre ny mpampiasa anao momba izany ianao amin'ny politikanao manokana, dia azonao atao ny mampiasa ny fampahalalana etsy ambany.
Smush dia mandefa sary any amin'ireo mpizara WPMU DEV hanatsara azy ireo amin'ny fampiasana tranonkala. Anisan'izany ny famindrana angona EXIF. Ny data EXIF ​​dia hoesorina na haverina tahaka ny taloha. Tsy tehirizina ao amin'ny mpizara WPMU DEV izy io.
Smush dia mampiasa serivisy mailaka (Drip) an'ny antoko fahatelo handefasana mailaka fampahalalana amin'ny mpitantana ny tranokala. Ny adiresy mailaka an'ny mpandrindra dia alefa any amin'ny Drip ary ny cookie dia napetraky ny serivisy. Ny fampahalalana momba ny mpitantana ihany no angonin'i Drip.